AGM, Gel, Batterie Solar, Batterie karbônina Lead, Batterie Lithium-CSPOWER
Batterie asidra Lead voaisy tombo-kase
Batterie AGM avo lenta
Bateria maharitra maharitra indostrialy 2V
Batterie Gel Cycle Deep-Temp
Batterie Deep Cycle Gel 2V
Batterie OPzS safo-drano
LiFePO4 Batterie nosoloina SLA
LiFePO4 Battery Rack 19''
Vokatra mifandraika amin'ny bateria
Bateria fitahirizana angovo
BATTERY MAZAVA TSARA
fihenam-bidy & fampiroboroboana
CS voaisy tombo-kase Lead asidra bateria
• Terminale aloha • Asidra firaka (AGM)
CSPOWER Front Terminal lead acid bateria dia ampiasaina indrindra amin'ny sehatry ny fifandraisana, izay novolavola amin'ny famolavolana, mitombina amin'ny rafitra ary mitana ny toerana voalohany amin'ny indostrian'izao tontolo izao.
• Marika: Marika CSPOWER / OEM ho an'ny mpanjifa malalaka
Volavolan'ny herinaratra: 12V
Fahaiza-manao: 12V55Ah ~ 12V200Ah
Namboarina fiainana fanompoana mitsingevana: 8-10 taona @ 25 °C/77 °F.
Marika: CSPOWER / OEM marika ho an'ny mpanjifa malalaka
Taratasy fanamarinana: ISO9001/14001/18001 ;CE/IEC 60896-21/22 / IEC 61427 / UL nankatoavina
> Famintinana ho an'ny bateria Slim
Toy ny tamin'ny fihaonambe INTELEC (International Telecommunications Energy) teo aloha, maro ny olona no niahiahy momba ny fiainana sy ny faharetan'ny bateria VRLA (Valve Regulated Lead Acid).Azo ampiasaina amin'ny fampiharana maro eo amin'ny sehatry ny fifandraisana.Mba hahazoana antoka fa azo antoka ny famatsiana herinaratra amin'ny fotoana rehetra, ny fotodrafitrasa ilaina dia tohana amin'ny rafitra bateria mahomby.Ny fahatapahan'ny herinaratra tampoka dia tsy olana intsony.Raha maty tampoka ny herinaratra, ny rafitra bateria dia mandray ny famatsiana herinaratra maika.
> Ny endri-javatra sy ny tombony ho an'ny Front terminal AGM Battery
Ity bateria AGM ho an'ny indostrian'ny fifandraisan-davitra ity dia tonga amin'ny endrika endrika manify sy fifandraisana amin'ny terminal.Noho izany, azo antoka ny fametrahana sy fikojakojana mora ary azo vonjena ny habaka.
Ny famolavolan'ny radial grid miampy ny teknolojia fivoriam-pivoriana dia manome toky an'ity batterie azo rechargement ity fa ny fahombiazan'ny famotsorana avo lenta.
Ny bateria fidirana eo anoloana dia manana endrika tsy manam-paharoa izay mahatonga azy io ho azo antoka fa zara raha mihena ny habetsaky ny electrolyte mandritra ny fampiasana ary tsy ilaina ny fampidirana rano mandritra ny androm-piasany.
Noho ny tsy manam-paharoa harafesiny mahatohitra grid firaka, ny hery fitahirizana sela afaka manompo mihoatra ny 8-10years amin'ny standby ankehitriny amin'ny mari-pana ny 25 degre.
Vita tanteraka amin'ny fitaovana madio tsara, ny bateria AGM fidirana eo anoloana dia miaraka amin'ny fivoahana tena ambany.
Ny teknolojia fampifangaroana entona dia mahatonga ity fitaovana famatsiana herinaratra ity ho sariaka sy tsy misy loto.Mba ho voafaritra manokana, noho io teknolojia io, ny bateria dia afaka manana tombo-kase avo lenta ny fahombiazan'ny fanehoan-kevitra, ka tsy miteraka zavona asidra.
Ny fampiasana ny teknolojia famehezana tsara indrindra amin'ny kilasy dia miantoka fa ity bateria UPS ity dia voaisy tombo-kase tsara, manome fiarovana ambony sy azo itokisana.
> Fampiharana ho an'ny bateria Telecom Access Front
Mety amin'ny kabinetra herinaratra 19inch sy 23inch.
Ampiasaina amin'ny rafi-pifandraisan-davitra ao anatin'izany ny biraon'ny fifanakalozana, ny onjam-peo microwave, ny tobin'ny finday, ny foibe data, ny onjam-peo ary ny onjam-peo.
Tsara ho an'ny rafitra famatsiana herinaratra amin'ny tambajotra tsy miankina na LAN.
Ampiasaina ho batterie rafitra famantarana sy batterie rafitra jiro maika.
Tonga lafatra ho an'ny rafitra EPS sy UPS.
Rafitra masoandro sy rivotra.
teo aloha: CL 2V Industrial AGM Battery
Manaraka: HTD Deep Cycle AGM Battery
Volonta (V) fahafahana
(Ahy) refy (mm) lanja Terminus
halavan'ny sakany hahavony Haavo tanteraka Mp
Front terminal 12V voaisy tombo-kase Maintenance maimaim-poana AGM Battery
FT12-180 12 180/10HR 560 125 316 316 55 M8×16
Fanamarihana: Ny vokatra dia hatsaraina tsy misy fampandrenesana, azafady mifandraisa amin'ny varotra cspower ho an'ny famaritana amin'ny karazana.
Mitady fampahalalana bebe kokoa momba ny bateria matihanina CSPOWER'S ve ianao?Manana ekipa manam-pahaizana vonona hanampy anao izahay.
Fenoy azafady ny taratasy ary hifandray aminao tsy ho ela ny solontenan'ny varotra.
Evolution Space Park, distrikan'i Baoan 71, tanànan'i Shenzhen, faritanin'i Guangdong, Sina.
Batterie tsara indrindra ho an'ny rafimasoandro Battery Ups ho an'ny solosaina Batterie 12v 7ah azo averina Batterie cellule solaire Paneau solaire misy bateria ho an'ny trano Batterie tsy misy fikojakojana